Nnukwu ụgwọ ọrụ - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Gwọ ọnwa akwụ ụgwọ ：
AKF na-ele talent anya dị ka akụ dị oke ọnụ ahịa nke ụlọ ọrụ na AKF na-a alwaysa ntị na uto na mmepe nke ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ. Ọ n'usoro na-ewepụta usoro ọrụ ọhụụ ndị ọrụ ọhụụ akpọrọ "otu ọkwa, ọdọ mmiri abụọ". "Otu ubube" na-ezo aka na ọwa abụọ maka mmepe teknụzụ na usoro njikwa. "Ọdọ mmiri abụọ" na-ezo aka na "ọdọ mmiri akụ ọkachamara" na "ọdọ akụ akụ".
Akwụ ụgwọ echiche:
Companylọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ ọkara na nke elu dị elu karịa ọkwa ụlọ ọrụ nkịtị maka ọkwa izugbe, yana nnukwu ụgwọ ụgwọ maka isi ihe, anyị na-anabata nloghachi ogologo oge na nloghachi oge dị iche iche yana nchikota ego na nloghachi ego na nloghachi ego na nloghachi. ụdị, ka ha wee na-adọta ikike dị elu tozuru oke itinye onwe ha na ọrụ na ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
N'ihe banyere nkesa, anyị ga-agbasi mbọ ike nweta ọdịiche ego dị ka nsonaazụ nke arụmọrụ na ntinye nyocha iji hụ na nlọghachi dị elu maka ndị nwere nnukwu arụmọrụ. N'okpuru ọnọdụ nke otu arụmọrụ ahụ, ohere ahụ na-enye ndị ọrụ ahụ ọrụ ogologo oge, nraranye na njirimara ọdịbendị dị elu. N'ihe banyere mgbanwe ụgwọ ụgwọ, ụlọ ọrụ ahụ na-agbaso mkpali nke oge, ma mesie ụzọ abụọ nkwukọrịta na usoro a, ka ha wee rụọ ọrụ nke ọma nke "ụgwọ" na traction na agbamume nke arụmọrụ onwe onye.
AKF haziri ihe mkpali dị iche iche iji kwụọ ndị mmadụ na ndị otu ụgwọ ọrụ pụrụ iche iji kpalie ndị ọrụ itinye aka. Ebumnuche ebumnuche nke ụlọ ọrụ AKF na-agbaso arụmọrụ ma ghara itinye aka na nha anya. Dabere na arụmọrụ ahụ, a na-ekewa usoro mkpali nke ụlọ ọrụ AKF ụzọ abụọ: agbamume ngwa ngwa na nchịkọta kwa afọ na nyocha.
Atụmatụ mkpuchi: ndị ọrụ nwere ikike ịnweta mkpuchi mmekọrịta ọha na eze, companylọ ọrụ ahụ na-enye ndị ọrụ anyị mkpuchi azụmaahịa dịka njirimara nke post. Acgwọ ezumike: ezumike ezumike kwa afọ na mgbakwunye na ezumike nke iwu steeti kwuru, ndị ọrụ ga-enwekwa ezumike ezumike kwa afọ na ezumike ara na Paternity Leave. Postsfọdụ posts na-enwe ọpụpụ n'ụlọ n'otu oge ahụ.
Ọrụ nri: Inye ndị ọrụ anyị nri n'efu.
Lọ obibi ndị ọrụ: ịnye ụlọ obibi maka ndị ọrụ nọ ná mkpa ma nyekwa ụlọ ọrụ obibi dị mkpa.
Maka ndị ọrụ na-anọghị na ụlọ ọrụ a ga-enye ha ego enyemaka nke ụlọ obibi. Atụmatụ njem: ndị ọrụ na-enwe otu ohere ezumike njem na kwa afọ.